Ndị na -emepụta CE/ 22KW & China CE/ 22KW Ụlọ ọrụ
Pịnye 2 16A 11kw EV chaja maka ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala eletrik
Nzukọ anyị na-ezube ịrụ ọrụ n'ikwesị ntụkwasị obi, na-ejere ndị ahịa anyị niile ozi, na-arụkwa ọrụ na teknụzụ ọhụrụ na igwe ọhụrụ na-aga n'ihu maka Onye na-emepụta China 62196-2 Charging EV Stations na Type 2 Plug 11kw, Azụmaahịa anyị na-echekwa azụmaahịa dị mma na nke dị mma nke eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ iji nyere aka mee ka anyị na ndị na-azụ ahịa anyị nwee mmekọrịta ogologo oge.
Ụdị Socket 2 32A 22kw Ụkwụ atọ chaja EV chaja akụrụngwa EV chaja maka chaja ụgbọ ala eletriki
Quots maka China EV Charging Point, Akụrụngwa Nchaji EV, Anyị nwere ezigbo ndị otu na -enye ọrụ ọkachamara, nzaghachi ngwa ngwa, nnyefe oge, ezigbo mma na ọnụ ahịa kacha mma maka ndị ahịa anyị. Afọ ojuju na ezi kredit nye onye ahịa ọ bụla bụ ihe kacha anyị mkpa. Anyị na -atụ anya imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa n'ụwa niile. Anyị kwenyere na anyị nwere ike imeju gị afọ. Anyị na -ejikwa obi ụtọ anabata ndị ahịa ileta ụlọ ọrụ anyị wee zụta ngwaahịa anyị.
Socket Wall Socket IEC Type2 16A 32A 250V 480V Electric Charging Station
Otu n'ime ihe na-ekpo ọkụ maka chaja ngwa ngwa nke China EV, chaja EV, ozugbo na ọrụ ire ahịa nke ndị otu ndụmọdụ anyị na-enye nwere ndị ahịa anyị obi ụtọ. A ga -ezitere gị ozi zuru ezu na paramita sitere na ngwa ahịa maka nkwenye zuru oke. Nwere olile anya na a ga-ajụ gị ajụjụ wee wuo mmekorita mmekọrịta ogologo oge.
Ọdịdị dị elu 32A LCD Electric Charger Wall-Mounted na Type2 Socket maka ụgbọ eletrik
High Quality China Type 2 EV Charging Station, EV Charger Pile, Anyị na-akwado n'ihu ọha, imekọ ihe ọnụ, ọnọdụ mmeri dị ka ụkpụrụ anyị, na-agbaso teknụzụ nke ime ndụ site na ịdị mma, na-etolite site n'ịkwụwa aka ọtọ, na-atụ anya n'ezie iwulite elu ezi mmekọrịta na ọtụtụ ndị ahịa na ndị enyi, iji nweta ọnọdụ mmeri na ọganihu niile.